Shutter 0.96 inosvitsa shanduko uye inodzokera kuUbuntu PPAs | Linux Vakapindwa muropa
Shutter inogona kudzokera kuUbuntu repositories nekuda kweshanduko dzakaunzwa muv0.96 ye software
Ini handisi mushandisi anonetsa zvakanyanya kana zvasvika kune zvekutora zvekushandisa. Pakutanga, ini ndinongoda kuti iwe uzviite zvakajairika, munzvimbo yakatenderera kana hwindo chairo. Ichokwadi kuti zvirevo dzimwe nguva zvinouya zvinobatsira, saka kuwedzerwa kuchangobva kuitika kuKDE Spectacle chishandiso kunouya kwandiri. Izvi zvisati zvaitika, pandaishandisa Ubuntu / GNOME, ndakaita zvirevo zvangu mu Shutter... kusvikira yanyangarika kubva kumahofisi epamutemo.
Shutter haisi annotation app, asi mupepeti waro wakagara uchiita senge wakapusa uye unoshanda kwandiri, saka ndakaisa iyo app pandaigona, izvo zvakakonzera kuti, kusiyana neSpectacle, mupepeti wayo anotendera iwe kuvhura mifananidzo iripo. Ubuntu paakachibvisa kubva kumahofisi ayo epamutemo ndaive nherera, uye kunyangwe zvirevo neGIMP kwechinguva, uye nekufamba kwenguva ndakakanganwa nezveShutter. Nekuda kweizvi, kubva pane zvakaitika kwandiri, ndinofunga Shutter 0.96 inogona kunge yanonoka, asi hazvimbodaro kana mufaro wacho wakanaka.
Shutter 0.96 inoshandura kushandisa GTK3
Izvo zvakaitika neShutter ndinofunga zvaive zvishoma nekuda kwekutsvedza kwevanogadzira. Pave nemakore akati wandei kubvira pandakakuudza nezvazvo ksnip, iyo yaiita senge yakanaka imwe nzira kuShutter iyo yandakapotsa zvakanyanya. Makore maviri apfuura echinyorwa ichocho, asi ndizvo izvo kubvisa software kubva kune yepamutemo Ubuntu zvinyorwa Zvakanga zvatoitika kare kare, saka zvinoita sekunge vaive vakazorora zvavo. Muchokwadi, Canonical yakatokwidziridza Flameshot.
Sezvambotaurwa, dambudziko raive kukanganisa kwekuchengeteka, iyo yakasara muGTK2, uye imwe yezvinhu zvitsva zvakaiswa muShutter 0.96 ndeye yaita kusvetuka kuenda kuGTK3, saka zvinotarisirwa kuti munguva pfupi inotevera inogona kuburitswa zvakare kubva kumahofisi epamutemo, uye isingashandisi yako snap package, ine zvimwe zvisingakwanisike, kana yechitatu bato repository.
Kana zviri zvimwe zvinhu zvitsva, zvinoita sekunge vanoonekera nekusavapo kwavo, hazvina kumbobvira zvirinani, nekuti ivo vakatora mukana wenguva iyoyo kubvisa sarudzo yekusarudza chikamu chehwindo, chimwe chinhu chisina kushandiswa, uye gadzirisa zvimwe zvikwata.
Kumirira izvo zvingangodaro zvichidzoka kumahofisi epamutemo, vashandisi vanogona kuisa Shutter 0.96 kubva kuLinux Kumukira PPA (batanidza pamusoro). Mune kumwe kugovera, senge iko kwakavakirwa paArch Linux, yatove muAUR, uye mu Iyi link pane mirairo yekuisa kune vamwe vakaita saFedora naGentoo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Shutter inogona kudzokera kuUbuntu repositories nekuda kweshanduko dzakaunzwa muv0.96 ye software
Fuchsia OS iri pano, asi pamwe handizvo zvawaitarisira